I-African Wild Cat (i-Felis silvestris lybica) iyinhlobo yemvelo yase-Afrika kanye nokhokho wekati elifuywayo. Zibukeka njengezinkambu ezifuywayo, kodwa zinezinyawo ezinde ezibenza bakwazi ukuhlala bezungezile.
Amakati asendle anesihlabathi esinombala obomvu, kanti ukuhluka okumnyama okutholakala ezindaweni ezimanzi kanye nokuhluka okulula ezindaweni ezidabulayo, futhi ukuphelelwa yimivimbo enesibindi, cishe njengekati lezintambo, kodwa ngezingqimba ezimbalwa nemivimbo ehlukaniswa kakhulu. Bavame ukuba nama-cream patches emikhanda yabo, isisu kanye naphakathi kwezimbongolo zabo.
Ikati lomuntu omdala lizoba ngu-85 kuya ku-100 cm ubude futhi libe nesisindo esingu-2,5 kuya ku-6 kg. Ithrekhi yabo ifana neye-caracal, encane kuphela. Ubude bomuntu omdala wangaphambili nangemuva unyawo luzungeze 36 mm ubude.
Ziyizilwane ezodwa zodwa, ngaphandle kwenkathi yokuqhathanisa noma uma owesifazane efuna ukugaya. Amantombazane akhiqiza ama-kittens amahlanu ngamalitha, aqale ukuzingela uma enamaviki angu-12 ubudala bese eba ozimele ezinyangeni ezinhlanu ubudala.
Zibalwa njengezilwane ezisengozini, ngoba zihambisana ne-hybridisation namakati asekhaya. Izinkinga ezihlanzekile ziqedwa ngokuphelele kwezinye izindawo lapho kunezinkambu ezifuywayo.
Amakati asezilwane adla ngokuyinhloko izilwane ezincane, njengezinduku, ama-hares, izinyoni, izilwane ezinwabuzelayo, ama-amphibians nezinsipho, kodwa zibhekwa njengezilwane ezinkulu zezinkukhu namawundlu amancane aphakathi kwezinsuku ezine ezindala kwezinye izindawo.
Bazithatha kuphela iwundlu elilodwa ngesikhathi, lapho iwundlu livame ukulunywa emqaleni, lihanjiswe futhi ngezinye izikhathi limbozwe. Kuyoba khona amacwecwe acacile ngaphansi kwesikhumba. Ngezinye izikhathi iwundlu alibulali, eliholela entanyeni evuvukile, ikhanda elikhukhumezayo kanye negundlu ekwenzeni i-gurgling izwi livela ekugqibeleni. Amakati asezilwane ngokuvamile adla inyama yesifuba namathanga angaphakathi, adle amathumbu.
Amakati asezilwane akavami ukudala izinkinga ezinkulu emfuyweni. Ukulimala kungavinjelwa ngokusebenzisa i-jackal-ucingo (ucingo lwamaxhaphozi olungaba ngu-1.2 m oluvulekile ngokuvuleka kwama-74 mm), ucingo lwamagesi, ukwakhiwa kwezilwane ezisengozini, umsindo, ukukhanya noma ukuphilisa umsindo, ukusetshenziswa kwezilwane zokulonda, njengezinja ze-Anatolian, izimbongolo noma izintshe kanye nabelusi ukuba banakekele izimvu ngezikhathi zobungozi.
Abalimi badinga imvume yokubamba ikati yasendle. Ukusetshenziswa kwezicupho zezinyosi nge-bait, evame ukusetshenziswa ku-caracal, sebenze kahle uma uzama ukuthatha la makakati.
Ukuze uthole olunye ulwazi thintana ne-Forum yokuPhathwa kwePredation.